ပြည်ပရောက် လုပ်သားများ တရားဝင် လွှဲပို့ငွေ နှစ်စဉ် တိုးတက်ရရှိနေ၊ ဘဏ်စနစ်ဖြင့် ပေးပို့မှုသည?? - Yangon Media Group
ပြည်ပရောက် လုပ်သားများ တရားဝင် လွှဲပို့ငွေ နှစ်စဉ် တိုးတက်ရရှိနေ၊ ဘဏ်စနစ်ဖြင့် ပေးပို့မှုသည??
ပြည်ပ ရောက်လုပ်သားများ တရားဝင်ငွေ လွှဲပို့ငွေ နှစ်စဉ်တိုးတက်ရရှိနေကာ ဘဏ်စနစ်ဖြင့်ပေးပို့မှုသည် အမှန်အကန်ဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး လွှဲပို့ငွေပေါ်အခွန်ကောက်ရန် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများမှ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့်တရားဝင်ချိတ်ဆက် ၍ မိသားစုများထံလွှဲပို့ငွေများလွှဲ ပြောင်းနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတွင်ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက သတင်း ထောက်များကို အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိစာရင်းဇယားအရ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် ဘဏ္ဍာ ငွေကျပ်ဘီလီယံ ၃၇ဝ ခန့်ရရှိခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ကျပ် ၆၂၃ ဘီလီယံအထိရရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
”လာမယ့်ကာလတွေမှာလည်း အခုထက်ပိုတိုးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလည်းပဲ အပြည့်အဝစာရင်းမရ သေးဘူး။ ပို့သလောက်ပဲရနေတယ်။ တကယ်တမ်းရမယ်ဆိုရင် ဒီထက် နှစ်ဆနီးပါးတောင်မကတိုးလာနိုင်တယ်လို့မျှော်မှန်းပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ဒါလေးကို ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ အခွန်ဝန်ကြီးဌာနရော၊ ဗဟိုဘဏ် ရော၊ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေရော ကြိုးစားပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်း ဆွေက ပြောသည်။ ယင်းအပြင် တရားဝင်ငွေလွှဲ စနစ်များတွင် ဘဏ်စနစ်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ငွေလွှဲပို့သူများအဆင်ပြေစွာပို့နိုင်ရေးကို ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်နေပြီး အခွန်ကောက်ရန်အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ”အခွန်ကောက်ဖို့ အစိုးရအနေနဲ့ မစဉ်းစားသေးပါဘူး။ နောက် တော့မှ သူ့ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခွန်ဆိုတာလည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရကို နှစ် စဉ်တင်ပြရတယ်။ လွှတ်တော်တွေ ကသတ်မှတ်ပြီးမှ လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခွန်ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အင်္ဂလန်အသင်းများ ပွဲကျပ်ရင်ဆိုင်ရမည့် ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့် ပွဲစဉ်များ မဲခွဲမှုထွက်ပေါ်လ